Ny antsipirihany SUPERPRO / XPS01 In-System Programming Station dia vahaolana tanteraka tsara ho an'ny fandaharana anaty rafitra PCB board. Mpandahatra SUPERPRO® / IS0 16-CH ISP marobe, fitaovana fitsapana, tabilao fanjaitra namboarina, mpitatitra ...
Fitaovana 50861 pcs ary mitombo hatrany. Fitaovana mpanohana miaraka amin'ny Vcc manomboka amin'ny 1.2V ka hatramin'ny 5V. Ny programa dia manafaingana bebe kokoa ...
※ Fivoarana avo lenta ...
Mandraka ankehitriny, manohana mpanamboatra IC 243, fitaovana 36688 pcs ary mitombo hatrany. Fitaovana mpanohana miaraka amin'ny Vcc manomboka amin'ny 1.2V ka hatramin'ny 5V. Haingam-pandeha haingana be noho ny maodely SUPERPRO / 501S. Namboarina tamin'ny mpamily pin-48 manerantany. Fomba fampiantranoana PC sy fijoroana ...
fitaovana ary mitombo hatrany. Endri-javatra: manohana karazana fitaovana 87454 amin'ny mpanamboatra IC 305 (amin'ny 15/3/2013) ary mitombo hatrany. Manohana ny EPROM 、 PagPR EPROM 、 Parallel sy Serial ...